[Review] Phấn phủ Dior cao cấp có chất lượng đáng mua không? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Phấn phủ Dior cao cấp có chất lượng đáng mua không? | Muasalebang in Muasalebang
Izinto ukhilimu wesizinda, ukhilimu liner futhi ekhethekile impushana Angamathuluzi e-makeup abalulekile ukuze abe nesisekelo esiphelele. Noma ubani othanda izimonyo ulangazelele kakhulu futhi uzimisele ngokuba ngumnikazi walolu hlobo lwezimonyo I-Dior powder ikhwalithi ngokwedlulele enezinzuzo eziningi ezinhle. Isihloko esilandelayo sizokunikeza impendulo yombuzo wokuthi ngabe lo mugqa womkhiqizo wehlelo leDior ufanelekile ukuthenga noma cha!
1 Sethula i-Dior Powder Coating
2 Ingabe i-Dior powder inhle ngempela?
2.1 2.1 Idizayini enhle neyinkimbinkimbi
2.2 2.2 Izithako ezinempilo neziphephile
2.3 2.3 Amandla okulawula uwoyela, ukumbozwa okuhle kakhulu
2.4 2.4 Zingaki izinhlobo ze-Dior powder?
2.5 2.5 I-Dior powder powder inemibala emingaki?
3 Ukubuyekezwa okuningiliziwe kakhulu kwemigqa yomkhiqizo we-5 Dior powder
3.1 3.1 I-Diorskin Forever Ever Control Loose Powder 001
3.2 3.2 I-Dior Diorskin Mineral Nude Matte Powder
3.3 3.3 I-Diorskin Nude Air Care&Dare Summer 2017 Limited Edition powder
3.4 3.4 I-Dior Diorskin Nude Air powder
3.5 3.5 I-Dior Totale Capture Compact SPF20 PA+++
Sethula i-Dior Powder Coating
I-Dior inegama eliphelele le-Christian Dior SA, okuwuphawu lwemfashini oluhamba phambili emhlabeni, eyasungulwa umklami omkhulu u-Christian Dior ngo-1946. Umkhiqizo wokuqala kanokusho owethulwa yile nkampani kwaba Ingubo enesinqe sezinyosi, eqhuma ezinqulwini, futhi i-sexy deep slit intamo yakha i-resonance enkulu emhlabeni wemfashini.
Eminyakeni emibili kuphela kamuva, i-Dior brand yasebenzisa ngokunenzuzo impumelelo yemboni yezemfashini ukwethula iphunga layo lokuqala – Miss Dior – eNew York. Iphunga likaDior likhethekile, li-sexy kangangokuthi akubona abesifazane kuphela kodwa amadoda kufanele “awele” othandweni.
Ngemva kohambo lwengxenye yeshumi leminyaka, kuze kube manje, i-Dior yethule imigqa yemikhiqizo yezimonyo nephunga eye “yashubisa” isipiliyoni futhi yaletha udumo kumkhiqizo omele ubuhle baseFrance. Ngaphezu kwalokho, inkampani futhi ineqoqo le-Dior Homme yamadoda, i-Baby Dior yezingane.
Inani lomkhiqizo kanye nekhwalithi yemikhiqizo ehehe izigidi zamakhasimende ukusuka e-Europe kuya eHollywood. Ngesikhathi esifanayo, uChristian Dior SA ungomunye wemikhiqizo ehamba phambili yezimonyo nemfashini emhlabeni.
Ingabe i-Dior powder inhle ngempela?
I-Dior powder iwumkhiqizo ophuma kuhlobo oluphezulu lwe-Dior yase-France, oluthatha inki nephepha eliningi kubablogi bobuhle. Ngoba akukhona nje kuphela ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokukhiqiza besimanje, impushana ibushelelezi futhi inokufakwa okuhle, kodwa ikhwalithi nayo ihlaba umxhwele ngokwedlulele.
2.1 Idizayini enhle neyinkimbinkimbi
“Kwabesifazane abanegama lomkhiqizo”, bonke bathanda idizayini ewubushelelezi, edonsa amehlo I-Dior powder kuyisinqumo esiphelele. Ingaphandle lihlatshwa umxhwele insimbi eqinile ekhanyayo, kanye nemigqa eqoshwe ngokucophelela nangobuciko.
Chaza yonke imininingwane yomkhiqizo, ngisho ne-Dior brand eqoshwe ebhokisini nayo iveza izinga elihlukile. Lo mklamo ukusiza ukuthi usule nje ngendwangu emanzi ukuze ukhanye njengokusha. Ikakhulukazi, kuzoba nzima ukuthi kuklwejwe ibhokisi noma igama lomkhiqizo lifiphazwe.
Bhekisela: [Review] Izimpushana eziphezulu zekhwalithi ezingu-8 zesikhumba esomile samantombazane
2.2 Izithako ezinempilo neziphephile
Uma usebenzisa i-powder, abesifazane abaningi bakhathazeka ngokuthi isikhumba sabo sizovinjelwa, i-acne ijwayele noma ithukuthele ngenxa yezithako zomkhiqizo. Nokho, nge I-Dior powder, ngeke usadinga ukukhathazeka ngalokho. I-Dior powder ikhishwa ezingxenyeni zemvelo ezilungele isikhumba sakho. Umkhiqizo ulungele zonke izinhlobo zesikhumba, kufaka phakathi isikhumba esinamafutha, esomile noma esibucayi.
Amavithamini namaminerali abalulekile awagcini nje ngokunikeza ukusabalala okuhle, adala isisekelo esiphelele sabesifazane. I-Dior powder isiza nokuvikela isikhumba ekujuleni ngaphakathi, isikhumba sinomswakama ngokugcwele, sinciphisa amafutha, siletha isikhumba esigcwele amandla.
2.3 Amandla okulawula uwoyela, ukumbozwa okuhle kakhulu
Ngaphezu komklamo “wangempela”, uhlu oluhle lwesithako, ikhono lokulawula uwoyela kanye nokumbozwa I-Dior powder Futhi kuyiphuzu lokuhlanganisa okungafanele lishaywe indiva. Kuyinto futhi le nzuzo ukuthi lo mkhiqizo ufanelwe ukuba “uthando lweqiniso” lwakhe ngesikhumba esinamafutha. Isikhumba sihlala somile amahora amaningi, sikugcina ukhululekile ngenkathi ungaphandle.
Akukhona lokho kuphela, i-Dior powder inekhava ephelele futhi yemvelo yokungapheleli ebusweni. Amachashaza ezinduna, i-melasma, imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo konke kuyanyamalala, okuhlinzeka ngesisekelo esibushelelezi, esinemibala elinganayo ekusiza ukuthi ube muhle esixukwini.
2.4 Zingaki izinhlobo ze-Dior powder?
I-Dior powder inezinhlobo ezi-2 eziyisisekelo zempushana: I-Dior powder futhi I-Dior compact powder. Uhlobo ngalunye lukashoki luzoba nezici ezihlukene. Ngokulandelayo:
I-Dior powder powder: Yakhiwe ngama-microscopic, izinhlayiya zempushana ezibushelelezi ezikulethela isisekelo esiphelele ngendlela emangalisayo. Ngaphandle kwalokho, ikhono lokungena lilula kakhulu futhi liyashesha, ukuthungwa nakho kome ngokwedlulele.
I-Dior compact powder: Ngegama elithi I-Skin Nude Air powder, inombala osondelene kakhulu nombala wesikhumba, kulula ukuyifaka esikhumbeni, ayibangeli ithoni yesikhumba emhlophe kakhulu noma ephambuke. Impushana ihlanganiswe, ngakho-ke uma uyisebenzisa, udinga nje ukuswayipha kancane ikhoneni le-makeup ukotini ukuze usakaze ubuso bonke. I-Dior compact powder uzizwa ulula, unethezekile ngisho nalapho kushisa.
2.5 I-Dior powder powder inemibala emingaki?
Phrezenta, I-Dior powder Kukhona amathoni ombala we-2 ayinhloko, i-Dior 010 ne-Dior 020. Yomibili le mibala kulula ukuyisebenzisa futhi ifanele isikhumba sabesifazane base-Asia.
Ithoni yombala 010: Umbala okhanyayo, ofanele amantombazane amhlophe noma apinki amhlophe, aphishekela isitayela sokwenza izimonyo esimnene nesifazane.
Ithoni yombala 020: Ikhethekile kumathoni esikhumba amaphakathi, futhi afaneleka kakhulu amantombazane anebala elimnyama.
Funda kabanzi: [Review] Top 8 isisekelo best for oily isikhumba for girls
Ukubuyekezwa okuningiliziwe kakhulu kwemigqa yomkhiqizo we-5 Dior powder
I-Dior powder ingenye “yamaphupho” ayo yonke intombazane efuna ukuthenga ekhabetheni layo lezimonyo. Ngenxa yezinzuzo zayo ezinkulu, ikhwalithi ephelele, le powder inenani elifanele. Ukuze uzenzele isinqumo esinolwazi, ake sibonisane Ukubuyekezwa okuningiliziwe kwemikhiqizo engu-5 ye-Dior powder okuhamba phambili!
3.1 I-Diorskin Forever Ever Control Loose Powder 001
Impela okungenani kanye empilweni yakho, uzwile igama elithi Diorskin Forever Ever Control Loose Powder 001 ngezincomo ezingenakubalwa. Esokuqala siwumklamo webhokisi eliyindilinga likanokusho nelisezingeni, elimnyama elicwebezelayo. Isivalo sebhokisi sihlotshiswe ngegama lomkhiqizo we-Dior elisiliva elivelele. Ukuthungwa kukhanya, kukhululekile, futhi kuhlala usuku lonke.
Ibhokisi I-Dior powder powder Iza nebhulashi le-kabuki elithandekayo, ama-bristles athambile alingana entendeni yesandla sakho, alungele kakhulu ukuthwala uma uhamba. Kukhona umbala owodwa kuphela wethoni 001, ofanele wonke amathoni esikhumba, okwenza umphumela obushelelezi, wemvelo, omncane futhi okhanyayo.
Lo mkhiqizo uphinde usebenzise ifomula ekhethekile, enekhono lokuphefumula, ukugcina izimonyo zibushelelezi futhi zihlala isikhathi eside ngaphandle kokukhathazeka ngobuso obunzima noma ukuvala ama-pores.
Ngalokho, I-Dior powder powder Ibuye ikwazi ukumunca uwoyela kahle kakhulu, ivimbele ilanga ngempumelelo. Basiza ngokufanele ukuvikela isikhumba elangeni kanye nokulimala kwemvelo kanye nesimo sezulu.
Intengo yesithenjwa: 1,100,000 VND.
3.2 I-Dior Diorskin Mineral Nude Matte Powder
Umkhiqizo olandelayo ohlwini lwezimpushana ezi-4 zeDior eziphezulu ezinekhwalithi ephezulu i-Diorskin Mineral Nude Matte Powder. Lena impushana ethandwa ngokwedlulele futhi eyamukelwa ngentshiseko ngabesifazane.
Ngefomula equkethe amaminerali e-crystalline, I-Dior powder Ngokushesha ifiphaza ukungapheleli kobuso. Ngaphezu kwalokho, izinhlayiya ze-emulsion zisiza futhi ubuso ukuthi bubambe ukukhanya kwemvelo, ukukhazimula kwe-multi-dimensional. Ingxube yamavithamini kanye nezakhi zokulandelela zondla isikhumba kusuka ekujuleni kwangaphakathi, ukusivikela ezintweni zangaphandle.
Ngaphezu kwalokho, ikhono lokumboza le-Diorskin Mineral Nude Matte Powder lihle kakhulu, ukuthungwa kwempushana kuhle kakhulu kuzimonyo ze-matte ezihlala isikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, nakuba inikeza umphumela we-matte lapho usebenza elangeni, kodwa I-Dior powder Akuzwakali namanje. Izinhlayiya zempushana zihlangana esikhumbeni, zinikeze umuzwa wemvelo njengokungathi awukaze usebenzise impushana.
Amathoni ombala nawo akhethwe ngokucophelela yi-Dior, anemibala yemvelo, angadali umuzwa wobumhlophe, ukuphambuka kwethoni yesikhumba. Ngakho-ke, i-Diorskin Mineral Nude Matte Powder iwumkhiqizo ofiselekayo wamantombazane.
3.3 I-Diorskin Nude Air Care&Dare Summer 2017 Limited Edition powder
Nansi inguqulo I-Dior powder okulinganiselwe ukuvikela nokuthuthukisa isikhumba. Impushana ilula njengenkungu encane, idala isivikelo esiphindwe kabili ngokumelene namathonya emvelo noma i-oxidation.
I-Diorskin Nude Air Care&Dare Summer 2017 iklanywe ngokunethezeka, iqinile ngegobolondo lensimbi elikhanyayo, imigqa eqoshwe ngobuciko. Ukumbozwa kweziphambeko ebusweni kuhle kakhulu, kuyilapho kubhebhethekisa isikhumba, ama-patches abomvu ohlangothini lwekhala, okusiza isikhumba ukuba sibe ngaphezulu. Ama-moles, ama-moldy noma ama-patchy coating, izinsalela zikashoki eziveziwe azisoze zavela kulo mkhiqizo.
Kuhlanganiswe namafutha abalulekile ezitshalo, isisekelo sincane futhi silula, sivumela isikhumba ukuba siphefumule ngenkathi sinikeza ukumbozwa kwemvelo kakhulu ngaphandle kokulimaza isikhumba.
Intengo yesithenjwa: 1,900,000 VND.
3.4 I-Dior Diorskin Nude Air powder
Eyethulwe ngokusemthethweni emakethe ekuqaleni kuka-2015, isizukulwane esisha se-Dior compact powder Diorskin Nude Air Powder isinqobe ngempela yonke intombazane esheshayo, yakha imfihlo yakho ngokubukeka kwemvelo, okucacile nokungenasici. . Ukuthungwa kwe I-Dior powder Lokhu kuncane, kungokwemvelo, kudonsa amafutha ebusweni kahle ngaphandle kokumisa isikhumba. Lo mkhiqizo ufanelekile ngempela esikhumbeni esinamafutha, isikhumba esihlangene samafutha ku-T-zone.
Ngaphezu kwalokho, I-Dior compact powder Iphinde idale ungqimba oluvikelayo lwesikhumba ngokumelene ne-oxidation kanye nama-ejenti ayingozi afana nentuthu, uthuli, ukukhanya kwelanga, njll. Umkhiqizo waziswa kakhulu enqubweni yokwenza izimonyo, ehlala isikhathi eside, ehlala isikhathi eside, engafihli noma ephansi. Amantombazane nawo akudingeki achithe umzamo omkhulu ukuze agcobe impushana ngokuphindaphindiwe, kodwa angagxuma usuku lonke.
I-Dior Nude Air Powder ihlezi iphezulu esigabeni sempushana esilinganisweni semigqa yezimonyo ehlonishwa kakhulu emhlabeni.
Intengo yesithenjwa: 1,350,000 VND.
Buka Okuningi: Iziqalo ezihamba phambili ezingu-10 zokulawula uwoyela ezisetshenziswa kakhulu namuhla
3.5 I-Dior Totale Capture Compact SPF20 PA+++
I-Dior Totale Capture Compact compact powder isipho sentsha uDior asinikeza abesifazane. Ngenhlanganisela entsha ye-Dior Capture Totale skincare line kanye nomculi we-makeup oyingcweti, I-Dior powder Inikeza isiphetho esibushelelezi, ithoni yesikhumba ilingane futhi imboze ngobumnene izimpawu zokuguga.
Nge-Complex Longaza – Ubuchwepheshe beselula bokugcwalisa imibimbi nobuchwepheshe bokusabalalisa ukukhanya okujulile. I-Dior idale umugqa wemikhiqizo enezilungiso “ezi-3” ezinhle kakhulu: gcwalisa imibimbi, amabala ansundu afiphele ngisho nethoni yesikhumba. Ngenxa yalokho, isikhumba sakho siyakhazimula, sibushelelezi futhi sicwebezele phakathi kwesixuku.
Imbewu yempova ye I-Dior compact powder Incane kakhulu, ithambile, futhi idala ifilimu elincanyana, elikhanyayo ngokushesha, elilungele amahora amaningi. Ithoni yombala ifaneleka ngokukhethekile esikhumbeni sabesifazane base-Asia, ihlanganisa esikhumbeni, esimanzi futhi esikhazimulayo. Ngesikhathi esifanayo, inkomba ekahle yokuvikela ilanga SPF20 PA+++ isiza ukuvikela isikhumba emiphumeleni eyingozi yelanga.
Intengo yesithenjwa: 1,550,000 VND.
Nalu ulwazi oluwusizo mayelana I-Dior powder Ngokusetshenziswa kwe-concealer, ukunakekelwa kwesikhumba okuvelele kwabesifazane. Ngethemba, ungabonisana futhi ufunde ngokucophelela ulwazi oluseceleni ukuze uzithole ungumkhiqizo ophelele.
Xem Thêm [Review] Top 9 bông tẩy trang tốt nhất hiện nay 2022 | Muasalebang